The Assembly ga-ejide elu n'ígwé ojii izute Jesus na ikuku | Apg29
The Assembly ga-ejide elu n'ígwé ojii izute Jesus na ikuku
The Bible na-ekwu na anyị kwesịrị ịdị na-ejide elu n'ígwé ojii. Rịba ama na ọ pụtara n'elu. Anyị direction ntem elu.
All nzọpụta bụ Chineke ụka n'ụwa ga-ejide elu izute Jesus na ikuku.
Anyị kwesịrị ya mere a ga-esịne ke otu gaa Jerusalem, ma anyị ga-ejide elu n'ígwé ojii izute Onyenwe anyị na ikuku. Ọ bụ na Jizọs na anyị wetara ka iji na anyị ga-enwe mgbe nile na ya.
1 Nke 4:17. Mgbe ahụ anyị nke dị ndụ ma na-anọgide ga-ejide elu ọnụ na ha na ígwé ojii izute Onyenwe anyị na ikuku . Ya mere, anyị ga- enwe mgbe nile na Jehova .
The Bible na-ekwu na anyị kwesịrị ịdị na-ejide elu n'ígwé ojii. Rịba ama na ọ na-anọchi elu . Anyị direction ntem elu. Mgbe anyị na e wetara elu , anyị ga-ezute Onyenwe anyị Jizọs na ikuku. Mb ka sụgharịrị ka ohere.
Ma Jizọs, afọ asaa mgbe e mesịrị, mgbe owuwe ga-abịa azụ n'ụwa ọ na-ewetara ọgbakọ. Mgbe ahụ, ọ laghachiri na chọọchị (anyị nile bụ ndị na-azọpụta, ndị na-ejide ya) na Jerusalem.
Ndi Ikpe 1:14. Ọ bụrụ na ndị a na-Enoch, nke asaa si Adam, buru amuma, si: Le, Jehova na-abịa na-apụghị ịgụta ọnụ ụlọ ọrụ nke ya nsọ.
Na parentheses, m nwere ike ime ka ị mata na e nwere "ọtụtụ ụlọ ọrụ." Anyị ga-esikwa otú ọtụtụ ọtụtụ zọpụta ga-alaghachi na Jesus!
Ígwé ojii na ikuku dị iche iche ihe
Rịba ama na "ígwé ojii" na "ikuku" abụghị otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ otu ihe ahụ, e nwere gaara abụọ dị iche iche okwu maka ya. N'ígwé ojii (n'ígwé ojii) rụgide anyị elu, ma ọ bụ na ikuku na anyị izute Onyenwe. Ma ọ bụ dị ka ọ na-sụgharịa na Mb "ohere".
Nke a na Akwụkwọ Nsọ eziokwu, m na-aghọta na obi m a ogologo oge, ma m na-na mbụ hụrụ ya dị ka o doro anya na dị ka m na nso nso hụrụ mgbe m na-agụ amaokwu a.
Anyị na-eme a trepunktslista nke mere na ọ na-aghọ ihe doro anya.
Anyị ga-ejide elu n'ígwé ojii
Anyị ga-izute Onyenwe anyị na ikuku.
Ya mere, anyị ga-enwe mgbe nile na Jehova.
Nke-anọ mgbe m nwere ike tinye:
Mgbe Jizọs na-abịa azụ Jerusalem, ọ na anyị mbụ e zutere Kraist!